ILizwi Foundation, Inc. ngumbutho ongajonganga kwenza nzuzo uqeshwe kwiphondo laseNew York nge-22 kaMeyi ka-1950. Lo kuphela kombutho okhoyo nowathi wasekwa wagunyaziswa nguMnu. Percival ngezi njongo. Isiseko asidibaniswanga okanye asidibananga nawo nawuphi na umbutho, kwaye asixhasi okanye sixhase nawuphina umntu, isikhokelo, umcebisi, utitshala okanye iqela elibanga ukuba liphefumlelwe, lonyuliwe okanye ligunyazisiwe ukuba lichaze kwaye litolike imibhalo kaPercival.
Ngokwemithetho yethu, isiseko sinokuba nenani elingenamda lamalungu akhetha ukunika inkxaso kunye nokuxhamla kwiinkonzo zawo. Kwezi zigaba, kukhethwe iiTrasti ezineetalente ezikhethekileyo kunye nemimandla yobungcali, ethi yona inyule iBhodi yaBalawuli ejongene nolawulo ngokubanzi kunye nokulawulwa kwemicimbi yequmrhu. IiTrasti kunye nabaLawuli bahlala kwiindawo ezahlukeneyo eUnited States nakwamanye amazwe. Sijoyina intlanganiso yonyaka kunye nonxibelelwano oluqhubekayo unyaka wonke ukuze sifezekise injongo yethu ekwabelwana ngayo- ukwenza ukuba imibhalo kaPercival ifumaneke ngokulula kunye nokunceda abanye abafundi abanxibelelana nathi abavela kwiindawo ezininzi zehlabathi ukujongana nezifundo zabo kunye nomceli mngeni abantu abaninzi abajamelana nawo. kwiminqweno yabo yokuqonda ubukho basemhlabeni. Ukuya kule nto yokufuna iNyaniso, UkuCinga nokuPhelela ayichazwanga ngokomgangatho, ubunzulu kunye nobuninzi.
Kwaye ke, ukuzinikela kwethu kunye nobugosa kukwazisa abantu behlabathi imixholo kunye nentsingiselo yale ncwadi UkuCinga nokuPhelela kunye nezinye iincwadi ezibhalwe nguHarold W. Percival. Ukusukela ngo-1950, iLizwi Foundation yapapasha yasasaza iincwadi zikaPercival yaza yanceda abafundi ekuqondeni imibhalo kaPercival. Ukufikelela kwethu kubonelela ngeencwadi kumabanjwa nakwimathala eencwadi. Sikwanikezela ngeencwadi ezinesaphulelo xa ziya kwabiwa nabanye. Ngomfundi wethu ukuya kwinkqubo yabafundi, sinceda ukuququzelela indlela yamalungu ethu angathanda ukufunda imisebenzi kaPercival kunye.
"Umyalezo Wethu" wawungumhleli wokuqala owabhalwa nguHarold W. Percival kwiphepha lakhe eliziwayo ngenyanga, Ilizwi. Wenze ingxelo emfutshane yokuhlela njengephepha lokuqala lephephancwadi. Okungentla iUkuphindaphinda kwesi sifutshane ngu qulelo Umthamo wokuqala wamashumi mabini anantlanu obophelelweyo, ngo-1904 - 1917. Umhleli unokufundwa uwonke Ikhasi loHlelo.